apple inonyorera patent pane inobviswa touchscreen laptop inoratidzira kana: inguva yakareba sei kusvikira tazoona ipadbook mhepo?
Kuru Nhau & Ongororo Apple inonyorera patent pane inobviswa touchscreen laptop inoratidzira kana: Inguva yakareba kusvika tione iPadBook Mhepo?
Chaizvoizvo, kune nzira mbiri dzakasiyana idzo Apple inoshanda. Apple inogona kutora musika wekushandisa uyo wadonha mumadhora, woijowa nehana uye mufaro (ona: MP3 players, mafoni emafoni, mapiritsi), kana Apple ichatarisa kuti mamwe makambani ari kubudirira sei uye kuita zvakafanana, asi ne yekuwedzera Apple 'mashiripiti' (verenga: kushambadzira). Nezuro, Apple yakanyorera patent yeinobviswa touchscreen laptop yatisingatarisiri kuve mudziyo, asi inonongedzera kumubvunzo wakakosha: Inguva yakareba sei kusvikira tazoona iyo iPadBook Air?
Iyo patent filing inoratidza chishandiso chingave chiri laptop, kwete nharembozha, iyo ine inobvisika inobata yekuratidzira skrini. Iyo yekuratidzira yaizobatana kune iyo laptop base kuburikidza ne60GHz ultrawideband fomati (senge WiGig pamwe). Iyo yekuratidzira yaizoshandisa zvakare induction kuchaja kuburikidza neiyo laptop hinge kubhadharisa iyo kuratidza kwekudzungaira kushandiswa.
Kuti zvive pachena, iyi patent haisi yechinhu chinosanganisa pamwechete iyo iPad uye Macbook. Iyi patent ndeye laputopu, iyo ine zvivindi zvemakomputa muchikamu chekhibhodi. Asi iyo yekubata inobatika uye inogona kushandisa kure kure kubatanidza kushandisa matumbo ekomputa, ayo achiri mubhokisi. Saka, iyi patent yehunyanzvi, panzvimbo pechinhu chaicho chinobatsira, nekuti hatigone kuona chero mabhenefiti ayo gadziriso iyi angave ane chimwe chinhu senge Windows 8 hybrid, kana Android transformer piritsi.
Pachinhu chidiki zvakadaro, iyi patent inoratidza kuti Apple iri kutarisa munzira dzakasiyana siyana dzekushandura chigadzirwa chayo.
Apple inoramba kusvikira isingakwanise kuramba zvakare
Tichitarisa kumashure paApple & apos; s zvimishumo, isu & apos; tichaona kuti Apple yataura ichidzokorora kuti inoona semalaptop emalaptop kuve asina basa, nekuti 'nzira yakanakisa yekuendesa multitouch iri kuburikidza ne trackpad.' Ehe, izvi ndizvoApple & apos; s modus operandi: taura kuti chimwe chinhu hachina basa kuti chisakanganisa kutengeswa kweimwe mudziyo (mune ino iPad), wozoita icho 'chisina basa' kana nzvimbo yemusika yeApple & apos ichichida..
Semuenzaniso, Apple yakaramba ichiramba kuti yaizombo gadzira smartphone kudzamara iPod kutengesa kwatanga kunhongonya, uye pakarepo iPhone yakaberekwa. Apple yakaramba ichitaura kuti haizombo gadzira 7 piritsi, kusvika iyo Kindle Moto neNexus 7 yatanga kudya kubva pairi piritsi uye ipapo takaona iyo mini mini. Iye zvino, chinhu chimwe chete icho chinogona kunge chiri kuitika pamwe nekubatana kwePC dzechivanhu uye nhare mbozha. Apple inoenderera ichitsvaga kuti touchscreen laptop haisi mumakadhi, uye kuti iyo iPad haidi chishongedzo chekhibhodi. Iyo kambani zvakare haisati yaronga zvirongwa zvekuunza pamwechete iOS neMacOS, asi iro zuva riri kuuya, handizvo & apos; handizvo here?
Android yatove nemahwendefa mashoma ane laptop dock accessories. Canonical inoda kugadzira Ubuntu iyo imwechete OS kubva pamafoni dzese dzokera kumaPC echinyakare. Uye, Microsoft & apos; s zano rese neWindows 8 ndeyekusvibisa mitsara pakati pemapiritsi nemalaptop. Chizvarwa chekutanga chemaWindows 8 zvishandiso chakaratidza iro zano, asi mazhinji anowira muchizvarwa chekutanga pitfall yekuva jack wezvese mabasa asi ishe weasina. Vamwe vanogona kubatirira kuMicrosoft Surface Pro sechinhu chakanakisa chinoratidza ramangwana reWindows, asi vamwe vanonongedza zvishandiso zvakaita seLenovo & apos; s Yoga inoshandurwa.
Zvisinei nekuti nzira yekumberi ndeyeiWindows, vagadziri vari kuramba vachisunda kudzamara vaiwana. Uye, pakupedzisira unova mubvunzo wekuti kana Apple & apos; s iPad uye Macbook combo (kutanga pa ~ $ 1500) inogona kubata mugove wemusika wakaringana kuita kuti Apple igare ichifara pamberi pemamwe madivayiri eApple neWindows.Iyo ramangwana iPadBook (kana iPad Maxi kana iPad Mhepo)
Android iri kutodya kure kuApple & apos; s chikamu chemusika wepiritsi, uye pane runyerekupe rwekuti Android ichave ichiita kusvetuka kubva pakushandura mapiritsi kuva akazara malaptop munguva pfupi iri kutevera. Windows inogona kuwedzera kutonga kwayo mune yechinyakare PC musika kuti iwedzere kune ayo 'nhare' manhamba ane akawanda uye akawedzera mahybridist anoshanduka kana echishanduri michina.Pakupedzisira, Apple inozopa mukati uye inosanganisa pamwechete iOS neMacOS, uye chishandiso chekutanga kuzviita chingangove chiri chakakura cheiyo iPad neMacBook Air.. Izvo & apos; zvinokwanisika kuti Apple yaizoenda neiyo yakazara kusangana uye zvakare ichipa dock yeiyo iPhone iyo yaizoishandura kuita yechinyakare Mac, zvakanyanya seCanonical & apos; zvirongwa zveUbuntu, asi zvingangove chichava mudziyo wekukwikwidzana nawo Microsoft & apos; s zvikepe zvehybrid zvigadzirwa.
Zita rechishandiso iri pachena rakaomarara kufungidzira. Iko kungangodaro kusangana kwemidziyo kungave kuchinjisa kuratidzwa kweMacBook Mhepo kune iyo iPad, iyo nemutemo weshoko fusion yaizozove iyo iPadBook kana iPad Mhepo. Uye, kana iwe ukabvisa iyo keyboard kiyi yacho, iwe & apos; muchasara nePad Maxi, nekuti zvinoita sezvisingaiti kuti Apple ingashandisa 9.7 inch inoratidzira palaptop. Iyo diki diki Laptop skrini Apple inopa ndeye 11 inch MacBook Air, uye iyo 11 padiki iPad ingangodonha pasi pezita reiyo iPad Maxi (kana isiri muzita repamutemo, ipapo mune tech denderedzwa shorthand.)
Bhodhoro chairo reApple izvozvi mukushandisa izvi zvingave zviri pasoftware. Sekureva kwehardware, it & apos; zviri nyore kuchinjisa kunze kweMacBook Air kuratidza kune yakakura iPad. Dambudziko nderekuti kugadzira bhiriji pakati peIOS neMacOS ibasa rakakura. Apple yanga ichiita zvimwe zvidiki zvepamusoro kuMacOS, sekuwedzera Mac App Store, uye kuwedzera LaunchPad, iri priming vashandisi vemalaptop ehupenyu neIpad, asi pane & apos; basa rakawanda rekuita kuti maapplication eIOS amhanye natively muMacOS kana kugadzira a new app paradigm (seWindows 8). Sekureva kwekushambadzira, zvinoita kunge mukana wakanakisa ungave mukuburitsa 11 inch iPadBook Air pamwe chete neMacOS 11 iyo inofanirwa kunge iri kuuya gore rinouya, asi ingangodaro haisi & apos; inguva yakaringana yeApple kuti iite yese ishande.
Mubvunzo pano hausi & apos; t zvakanyanya kana kubatana uku kukaitika, asi riinhi. Hazvizogone kuitika chero nguva munguva pfupi. Kuwedzeredzwa kweiyo mini mini kune iyo roster kunobatsira Apple kuramba izvo zvisingadzivisike chinguva chidiki. Uye, Windows 8 ichiri shanduko OS yeMicrosoft, zvichireva kuti zvishandiso zvakanamatira mune yakasanzwisisika limbo uko vagadziri vasina & apos; vasina zano rekongiri rekuti ungagona sei kugadzira. Pakupedzisira, Windows ichave izereSubwayYemazuva ano UI, uye kusangana chaiko pakati peWindows 8 neWindows Phone 8 kunozojeka. Izvo zvinogona kunge richiri rimwe gore kana maviri kure zvakadaro, zvichireva kuti Apple haizove uchinzwa kupisa kubva kudivi.
Kune rimwe divi, Android inotaridzika kuenderera mberi nekufamba kwayo kune chero uye chero chinhu chakatenderedza, uye sezvo iyo Android 10-inch piritsi app ecosystem ichienderera ichikura, pachave nekuwedzera uye akawanda eApple zvishandiso izvo zvinotanga kukwikwidza zvakananga nemaitiro echinyakare malaptop. Android yanga ichifamba nekukurumidza kupfuura Windows mazuva ano, saka tinogona kutanga kuona zvishandiso zveApple zvinogona kuva vakwikwidzi vepamutemo kuMacBook Air nekukurumidza gore rinouya. Uye, izvo zvinozoisa kumwe kumanikidza paApple kuti iite izvo zvagara ichiramba.
mabviro: USPTO kuburikidza Engadget
t-nhare yemahara tambo
zvakanakira nekuipira kwekushandisa otomatiki
Mamwe maApple Stores anogona kuvhurazve vhiki rino
Maitiro ekudzima iyo iPhone ad yekutevera app inokurudzira mune iOS 14.5
Samsung Gear 2 Ongororo
Kudanwa kweDuty vs PubG Kuenzanisa: ndeupi ane iri nani kurwa royale?
Fallout Shelter inowana mitsva mibvunzo, dzimba dzemakamuri, Mahoridhe Mhemberero mune yazvino kugadzirisa
Apple inofanirwa kurega vashandisi vepaApp vachirodha maapplication kubva mhiri kweApp Store?
Samsung Galaxy S10, S10e uye S10 Plus: maitiro ekutora skrini